Tag: xml saịtị saịtị | Martech Zone
Tag: xml saịtị saịtị
M zutere na a ahịa onye na-adọga ha search engine ogo. Ka m na-enyocha usoro njikwa ọdịnaya ha (CMS), achọgharịrị m ụfọdụ omume kacha mma m na - ahụghị. Tupu m nye ndepụta nyocha iji nyochaa site n'aka onye na-eweta CMS gị, ekwesịrị m ibu ụzọ kwuo na enweghị ezigbo ihe kpatara ụlọ ọrụ B NOTGH to inwe usoro njikwa ọdịnaya ọzọ. CMS ga - enye gi ma obu ndi ahia gi
Anaghị m atụ aro ka ndị ahịa wulite ecommerce nke ha ma ọ bụ sistemụ njikwa ọdịnaya n'ihi nhọrọ nhọrọ ọhụụ niile a na-adịghị ahụ anya nke dị mkpa n'oge a - na-elekwasị anya na nyocha na njikarịcha mmekọrịta. Edere m otu isiokwu banyere otu esi ahọta CMS ma m ka na-egosi ya ụlọ ọrụ ndị mụ na ha na-arụ ọrụ na-anwa ọnwụnwa iji wuo usoro njikwa ọdịnaya nke ha. Agbanyeghị, enwere ọnọdụ ebe a
Ndenye Blog: Nchịkọta Blog M
Nrụgide na-aga n'ihu! Shonnie Lavendar, Blog Coach, gwara m ka m tinye blọọgụ ya - Nchịkọta Blog M: Mee ka usoro mmụta blog dị mfe na onye nchịkwa Shonnie Lavender! Ekpebiri m ịhapụ ma gụọ ụfọdụ na saịtị Shonnie ma enwere m obi ụtọ na m mere! Ekwetaghị m na enwere nnọchi anya na soshal midia nke ụmụ nwanyị na ndị pere mpe. Adịghị m onye nhata blogger, ana m eche na ọ bụrụ na anyị ga-amụta ihe n'ezie
Mgbe ụfọdụ ị na-agha ụgha, ị ga-enweta nwa agbọghọ ahụ!
Thursday, May 3, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ana m ahapụ enyi m nwanyị. Nke ahụ dị mma! Nụrụ ya ebe a. Tupu ị mata echiche banyere ajọ onye ajọ omume m bụ, enweghị m enyi nwanyị. Ma ọ dịkarịa ala abụghị mmadụ, dị ndụ, ụdị ume. M na-egwu ndị mmadụ ọchị na aha enyi m nwaanyị bụ MacBookPro. N’oge na-adịbeghị anya, enyi m nwanyị anaghị enwe oke iwe, ọ naghị eteta mgbe m chọrọ ka ọ ghara inwe obi ụtọ ruo mgbe oyi jụrụ ya. Chaị… na-echetara m mgbe